Mr. Qaaxo oo ku Go,odoonsan Toronto, Garan La,ana Gees uu u Dhaqaaqo – Rasaasa News
Feb 27, 2010 Ismaciil qaaxo, Jwxo-shiil
Qaaxo oo noqday Neef la gawracay geedo kama waabto, Astaamihii da,ada ee caas caasnimaduna ay aad maskaxdiisa uga muuqdaan, ayaa eegga Toronto Canada ku banjaran.
Waxaa todobaadkii hore Toronto kanada Tigidh deyn ah ku yimid Maxamed Ismaciil [Qaaxo], oo kooxda Jwxo-shiil, masuuliyadaheedii oo dhan isagu gacanta ku haya. Qaaxo ayaa ah bay dhaahaan Gudoomiye xigeenka 1aad ee kooxda Jwxo-shiil, ahna hogaanka Arimaha Jaaliyaadka.
Qaaxo oo in muddo ahba ku cadibnaa Australi, dhawr goorna uu booliska Australia su,aalo weydiiyey, ayaa booliska fasax ka soo qaatay si uu Kanada ugu yimaado tigidh dayn ah oo dalkaas looga soo diray. Qaaxo oo aan la garanaynin ujeedo iyo ka jeedada uu kanada u tagay, ayaa damcay in uu shir u qabto dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee degan Tronto, waxaana u soo xaadiray dad yar.
waxaa diiday in uu shirkaas yimaado Maxamed Macalin [Seedi] oo isagu hore u ahaa hogaanka Jaaliyaadka ee kooxda Jwxo-shiil, ahan seediga Jwxo-shiil. Xilkaas Maxamed Macalin uu Jwxo-shiil hore ugu dhiibtay ayaa ahaa mid uu ku soo uruuriyo xoogaaga dhaqaalaha ah ee dadka laga siro.
Seedi, waa uu diiday in uu yimaado shirka uu Qaaxo jooga isaga oo ka cadhaysan in uu Qaaxo ka dambeeyey sifiihii xilka lagaga qaaday, balse aan qoyaan dambe la helin. Qaaxo ayaa kolkii uu dad fiican meesha iman waayey oo xitaa uu Seedi diiday, ayaa Seedi laga codsaday in uu telephone kula soo hadlo dadkii meesha yimid si ayna u dareemin in ay dhibaato xun dhextaal kooxda Jwxo-shiil.
Maxamed Ismaciil Qaaxo, oo aad u wareersan astaamihii da,ada ee caascaasnimaduna ay ka muuqdaan ayaa Axmed Cabdi xukun oo markii ay ONLF qumanayd ka tagay, ayuu lugaha Qabsaday isaga oo leh isku meel baynu ku dhalanay, dadkii ma dhax mari karo in lafahayga la ii dilo ayaan halis ugu jiraa.
Waxaa dad ugu dambaysay in uu Ina Cabdixukun gurigiisa joogay, Ina cabdi xukuna uu ku yidhi “ONLF iyada oo is jecel oo aan madax ka ahay ayaan iskay uga tagay,” tala teedana aniga lay waydiin maayo, ee Maxamed Ismaciilow dantaada sheego.
Xiligaas ay is arkeen Axmed Cabdi Xukun, Qaaxo meel uu jaan iyo cidhib dhigay lama ogga, waxaana aad uga walaacsan qoyskiisii, hadaba cidii war ka haysa fadlan ha noo soo sheegto si aanu qoyskiisii u war galino.
rasaas runta sheegtee rafiiqaaga ka yeelo.